नेकपा –माओबादी जिम्मेवारीको साथ संबिधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल – प्रबक्ता भूसाल – Peacepokhara.com
लामो रस्साकस्सी पछि नेकपा –माओबादीले उठाउदै आएको राष्ट्रिय राजनितिक सभा भदौ ३१ गते गर्ने सहमति भएको छ । दोस्रो संबिधानसभा निर्बाचन बहिस्कार गरी संबिधानसभा भबन बाहिरै रहेको नेकपा–माओबादी राजनितिक सभा मार्फत संबिधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन लागेको छ । शुक्रवार चारदलिय कार्यदलले राजनितिक सभाको मिति टुङ्गो लगाएपछि पिसपोखराडटकमसंगको कुराकानीमा नेकपा –माओबादीका प्रबक्ता पम्फा भूसालले सहमतिको संबिधान लेख्नको लागि नेकपा – माओबादी जिम्मेवारी बोधको साथ उपस्थित भएको बताईन् । प्रस्तुत छ उनिसंग गरिएको कुराकानी
भदौ ३१ गते नै राष्ट्रिय राजनितिक सभा हुने भएछ है ?
हजुर हो ।
कि न त अघिल्लो दिन असोज १ मा अडान थियो, एक दिन पछि सरेपछि तपाईहरु एक दिन अघि आउनुभएछ त ?
हामीले त्यो अरु राजनितिक कुराको सहमति हुनको लागि पार्टीको आन्तरिक राजनितिक कार्यक्रम हो , त्यसलाई सेडुल मिलाएर अलि नजिक नजिक सारेर ३१ गतेलाई हाम्रो उच्च तहको नेतृत्वले पनि फुर्सद लिने र राजनितिक सभामा सहभागि हुने गरेर पार्टी भित्रको तारतम्य मिलायौ र चार दलको कार्यदल बैैंठक बसेर त्यसलाई निर्णय ग¥यौ
यो गोलमेच सभा भनौ, राष्ट्रिय राजनितिक सभाको माग तपाईहरुले धेरै पहिलेदेखि उठाउदै आउनुभएको थियो, तपाईहरुले भनेझै अब राष्ट्रिय राजनिति सभा हुने भएपछि त्यहा जानको लागि नेकपा माओबादीको आन्तरिक तयारी के छ ?
यो संबिधानसभाले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सबैको सहभागिता रहन्न र त्यसरी लेखेको संबिधान सबैको हुन्न । त्यसैले हामी एउटा भिन्दै खालको राष्ट्रिय राजनितिक सभाको गठन गरौ, संबिधान सभा भित्र भएका र बाहिर भएका दलहरु बसेर संबिधानमा एउटा सहमति कायम गरी सहमतिको संबिधान लेखौ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक राख्दै आएका हौ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री अलि सकारात्मक देखिएपछि हामीले आफ्नो माग राख्यौ र आज मिति टुङ्गो लागेको छ । यसको कार्यबिधि बारे भोलि बस्ने कार्यदलको बैंठकले टुङ्गो लगाउनेछ ।
राजनितिक सभाभित्र छिरिसकेपछि तपाईहरु कत्तिको कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो ?
कडा वा नरम भन्ने कुरा भएन । परिवर्तनको संबिधान हो हामीले खोजेको । राज्यको पुनसंरचना, प्राकृतिक स्रोत माथिको बाडफाड र अधिकार, शासकिय स्वरुप र न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकार लगायतका बिषयहरुले एउटा नयाँ संबिधान आउने कुरा हो । एउटैले भनेको त संबिधान बन्दैन , राष्ट्रिय राजनितिक सहमति कायम गर्नुपर्छ । त्यसमा कति हामीले गिभ एण्ड टेक गर्न सक्छौ ? र एउटा सम्झौतामा पुग्न सक्छौ ? यो प्रक्रियाको मुख्य कुरा हो । त्यसरी लेखिएको संबिधान नै सबैले अपनत्वको फिल गर्न सक्ने र कार्यन्वयन गर्न सक्ने संबिधान बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
हो त्यहि राष्ट्रिय राजनितिक सभाले सबै बिबादलाई टुङ्गो लगाउछ भन्नेमा पहिल्यै तपाई कति बिश्वस्त ?
हामी त आशाबादी छौ । किनकी त्यो बाहेक अरु कुनै तरिकाले संबिधान लेख्न खोजियो भने जो सुकैले लेखेपनि जस्तो संबिधान लेखेपनि त्यसले नेपाली आबश्यकताको संबिधान दिदैन त्यसैले हामीले त्यहा सहमति कायम गर्नै पर्छ ।
अब यसरी बुझ्न मिल्छ यसलाई कि तपाईहरु संबिधान निर्माण प्रक्रियामा संबिधान सभा भित्र नछिरेपनि राष्ट्रिय राजनितिक सभा मार्फत सामेल हुनुभयो ?
हो त्यो सहमतिको संबिधान लेख्नको लागि नेकपा – माओबादी जिम्मेवारी बोधको साथ उपस्थित भएको छ ।
Krishna Dawadi 31 May 2018
आचारसंहिता लागू हुने अघिल्लो दिन प्रहरीमा व्यापक सरुवा र बढुवा
पश्चिमाञ्चल होटल संघको तेस्रो अधिबेशन तथा पाचौ साधारणसभा : पर्यटन प्रबद्र्धन र लगानी संरक्षण मुख्य मुद्दा
peacepokhara 13 Jan 2015